श्रीमतीले परपुरुषसँग लागेर २२ बर्ष बिदेशमा कमाई गरेर पठाएको सम्पति सकेपछि श्रीमानले लिए ज्यान – Khabar PatrikaNp
झापाको गौरादह नगरपालिका-१ मा एक म’हिलाको ज्या’न लि’एको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले घ’टनामा संलग्न रहेको भन्दै उनका श्रीमानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दै थियो। ती महिलाका श्रीमानलाई पुर्पक्षका लागि जे’ल च’लान समेत गरिसकिएको छ।
यो घटना सेलाउन नपाउँदै झापाकै कमल गाउँपालिकामा फेरी अर्को घ’टना भएको छ । झापाको कमल गाउँपालिका-६ जिवनचोकमा खेतीमा गएका समयमा एक पुरुषले आफ्नै श्रीमतीको ज्या’न लि’ए’का छन् । आइतबार साँझ भएको यो घ’टनामा संलग्न पुरुषलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।
घ’टनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको दमक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक विजयराज पण्डितले जानकारी दिएका छन् । झापाको दमक नगरपालिका-१ मामा चौक बस्ने ४७ वर्षीय चूडामणि भण्डारीले २२ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताए । उनले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय विदेशमा पसिना ब’गाएर केही धन सम्पत्ती पनि जोडजाम गरेका थिए। जब उनी गत भदौमा स्वदेश फर्किए ।
त्यसपछि ३७ वर्षीय निजकी श्रीमती टीकामायाले अनेक ब’हानाबा’जी सुरु गर्न थालिन। उनीहरू गत भदौ देखी एकै स्थानमा बसेका समेत थिएनन् । चूडामणिले कमल गाउँपालिका-६ जीवनचोकमा केही जग्गा समेत जोडेका थिए। काम गर्ने कोही नभएपछि उनले धान खेती गर्न अरुलाई नै दिएका थिए ।
घटना भएको दिन अर्थात् आइतबार चूडामणि आफ्ना अरू २ जना नातेदार सहित सो स्थानमा धान जिम्मा लिन पुगेका थिए ।उनकी श्रीमतीले पनि आफूलाई धान चाहिने भन्दै उनीसँग केही अघिदेखी नै वि ‘वाद गर्दै आएकी थिइन । जब चूडामणि धान लिन आफ्नो खेतीमा पुगे । त्यसको केहिबेर मै श्रीमती टिकामाया पनि सो स्थानमा प्रकाशचन्द्र दाहालको मोटरसाइकलमा चढेर पुगिन ।
जब चूडामणिले आफ्नी श्रीमतीको ज्या’न लि’ए त्यसपछि त्यहा हो’ह’ल्ला’ र हा’रगु’हारको चि’त्कार सुनेर गाउँलेहरू भेला भए । तर कसैलेपनि चूडामणिको हा’तमा भएको ‘खु’कु’री खोस्ने हि’म्मत गर्न सकेनन् । बरु चूडामणि आफैले मैले यसलाई ‘मा’ ‘र्नु थिए मा”रे (श्रीमतीको ला’स देखाउँदै) , म कसैलाई केही गर्दिन अब प्रहरीलाई खबर गर्दिनुस् भने । त्यसपछि स्थानीयले प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी गराए ।
प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा चूडामणिले घटनास्थलमै आफ्नो अ’पराध स्वी’कार गरेको दमक प्रहरी प्रमुख पण्डितले बताए । घटनाको भोलिपल्ट सोमबार अर्थात् आज बिहान हामीले घटनाका बारेमा थप जानकारी लिन इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रमुख विजयराज पण्डितलाई भेट्यौँ । उनले यस घटनाको मुख्य कारण पारिवारिक बेमेल नै रहेको अभियुक्तले बयान दिएको बताएका छन् ।
Prev१२ बर्षिय छोरी १० बर्षका छोरा,पेन्सन, पसलको नगद सम्पत्ति र गरगहनासहित लक्ष्मी बेपत्ता खोजिदिन श्रीमानको अनुरोध
श्रीमानलाई छोडेर फेसबुकमा लब परेको केटा संग भाग्दा बम्बईमा बेचिन पुगिन…!
दुई सन्तानकी भाउजु लिएर देवर भागे, पक्राउपछि बयान सुन्दा सबै चकित ….!